Ciidanka Puntland oo gacanta ku dhigay Khamri fara badan oo ka yimid Itoobiya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ciidanka Puntland oo gacanta ku dhigay Khamri fara badan oo ka yimid...
Ciidanka Puntland oo gacanta ku dhigay Khamri fara badan oo ka yimid Itoobiya
Sida uu noo soo sheegay wariyaheena ku sugan magaalada Boosaaso, Ciidanka Puntland qeybtiisa Gobalka Bari ayaa soo Bandhigay Khamri farabadan oo Ciidamada amniga ay ku soo qabteen, iyagoo Howgalo ku Jiray. Saraakiisha Taliska Booliska Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegeen in Khamriga lasoo qabtay la doonayay in si qarsoodi ah loo soo geliyo Boosaaso, hayeeshee laamaha amniga ayaa ka hortegay.
Sida ay sheegeen ciidanka Amaanka, tirada Guud ee Khamrigaan oo ku jiray Kaartoono loo ekeesiyay Bagaashka Alaabta ayaa ahaa 108 dhalo, kuwaaas oo lagu soo sameeyay Wadanka Itoobiya. Taliyaha Qeybta Boliska Gobalka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu u mahadceliyay in Ciidanka amniga ee gacanta kusoo dhigay Khamrigaas oo la doonayay in si qarsoodi ah lagu geliyo Boosaaso.